VaBarack Obama, Amai Michelle Obama vachimhoresana naVaDonald Trump nemudzimai wavo Amai Melania Trump kuWhite House. Washington, Jan. 20, 2017.
America yagadza mutungamiri wayo wechimakumi mana nemashanu, VaDonald Trump pahurongwa hwanga huchionekwa nepasi rose.
Vanga vari mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, vatambidza VaTrump masimba sezvinodiwa nemitemo yeAmerica.
Nyaya yekugadza vatungamiri zvakadai yakatangwa musi wa30 Kubvumbi 1789 pakatora mhiko mutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga VaGeorge Washington.
Gen. Dwight D. Eisenhower nemutevedzeri wavo VaRichard Nixon
Zuva iri rakazoitwa zororo naVaDwight D Eisenhower vakambotungamirawo America.
Kubva muna 1789 kusvika muna 1933 mutungamiri wenyika nemutevedzeroi wake vaitora mhiko musi wa 4 Kurume.
Asi bumbiro remitemo rakazovandudzwa muna 1933 rikazotanga kushanda muna 1937 apo vatungamiri vainge votora mhiko musi wa20 Ndira.
Mwedzi waKurume wainge wasarudzwa sezvo zvainetsa makare kuunganidza mavhoti.
Asi kubva kumakore ekuma1800, vatungamiri veAmerica havagadzwe musi weSvondo nekudaro kana musi weSvondo uri iwo musi wa20 Ndira, mutungamiri anotoreswa mhiko kuWhite House pane vanhu vashoma ozotora mhiko zvakare musi weMuvhuro.
Izvi zvakaitwa muna 1985 apo VaRonald Reagan vakatoreswa mhiko kaviri kuWhite House nepadare reparamende kana kuti Capitol.
Vatungamiri vasati vagadzwa makare vaibva vambotura mashoko avo kunyika, asi ikozvino vanotanga vatoreswa mhiko nemutongi mukuru wematare vochizotura mashoko kunyika yavo.
VaWilliam Henry Harrison ndivo vakataura kwenguva yakareba munhoroondo yevatungamiri veAmerica musi wa 4 Kurume 1841. Muna 1921 VaWarren G Harding ndivo vakave mutungamiri wekutanga kushandisa loud speaker.
Muna 1925, VaHarry S Truman ndivo vakatanga kutura mashoko kunyika vachibuda pazvivhiti vhiti neparhedhiyo. Kugadzwa kwaVaBill Clinton muna 1997 ndiko kwakatanga kubuda padandemutande reinternet.
VaGeorge Washington ndivo vakatangawo kutaura mashoko ekuti mwari ndibatsirei pakutora mhiko kana kuti “So help me God” zvave kuitwa nevatungamiri vakawanda pasi rose.
Asi kunyangwe vatungamiri vachienda havo murunyararo, vamwe vanhu vanenge vachiratidzira nekusafarira vatungamiri vatsva vanenge vachipinda.
Zvose izvi zvinoitwa murunyararo.
Ko chii chingadzidzwe neZimbabwe panyaya yekusiya masimba muAmerica?
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye richishanda neHuman Rights Watch, VaDewa Mavhinga, vatiwo zviri kuitwa muAmerica zvinonetsa kuona zvichiitika muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica nekuda kwekutonga nedemo uye kusaremekedza zvabuda musarudzo.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuZanu-PF, VaGadzira Chirumhanzu, vanoti havatenderane naVaMavhinga vachiti hakuna dunhu risina datya.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaJoy Mabenge, vanoti zvakawanda zvinodzidzwa neZimbabwe vachiti kunyangwe vamwe vari kugunun’una uye vakawanda vachifarira VaObama vachiri kudiwa nevanhu, havasi kurambira pachigaro.
Vakakundwao musarudzo yemutungamiri weAmerica, Amai Hillary Clinton, vange vari pagungano rekutambidzana masimba kuratidza zvanzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika munongedzo wekuti vanhu vemuAmerica vanoremekedza sarudzo.
Amai Hillary Clinton naVaBill Clinton
Mashoko aya atsinhirwawo nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kuFlorida, VaPromise Sande, avo vati musarudzo dzinotevera munyika, mapato ose anofanira kuremekedza zvido zvevanhu.
Sarudzo dzemuAmerica dzinotevera dzichaitwa muna 2020 uye mutungamiri wenyika achizotora mhiko muna 2021.